Biqiltoonni haaraan kudhan faayidaa adda addaa qaban bara kana argaman - BBC News Afaan Oromoo
Biqiltoonni haaraan kudhan faayidaa adda addaa qaban bara kana argaman
Qorattoonni biqiltuuwwan irratti qoratan wantoota dhokatanii jiran jaarraa hedduudhaaf qorataaniiru.
Kun ta'ee osoo jiruu biqiltoonni qorannoo saayinsiidhaan adda ta'an ammallaa argamaa jiru.
Saayintistoonni Royal Botanic Gardens, Kew, keessa hojjetan bara 2018 keessatti qofa akaakuu biqiltootaa 100 ol ta'an argatanii moggaasuu danda'aniiru.
Argannoowwan saayintistootaa kana keessatti akaakuuwwan biqiltootaa jiran keessaa warreen foon sooratan (carnivorous pitcher plants), kan adda ta'an (exotic orchids) jedhamaniifi warra baala hiddaa qaban ta'anii humna qorichummaa guddaan isaan qaban ammallee bira hin ga'amiin jiru keessatti argamu.
Biqilaa bishaan keessaa
Prof Aiah Lebbie saayintistiin jedhamu Sierra Leone keessatti biqiltuu adda ta'ee bishaan keessaa kattaa jalatti argachuu isaa dubbata. Biqiltuun kun Lebbiea Grandiflora, kan jedhamu yommuu ta'a maqaa isaas saayintistichuma irraa moggaafame.
Madda suuraa, RBG Kew
Akaakuu biqiltuu haarawaa bishaan keesatti argame
"Amalawwan addaa qaba, biqiltoota isa waliin walfakkaataniin adda kan ta'e waanan irratti argeef waanta baayyee adda ta'e tokko bira akka geenyen hubadhe," jechuun BBC News tti himee Prof Lebbie. "Maqaan koo yeroo hunda kana waliin walqabata."
Biqiltuun kun baduudhaaf sadarkaa baayyee hamaa ta'erra ga'eera. Biqiltuun kun yeroo hedduu bakkawwan yeroo baayyee baduudhaaf saxxialaman akka bakka albuuda baasuufi pirojektoota humna ibsaatti waan argamaniif, saayintistoonni waggoota sanyiin biqiltoota kanaa baduu danda'u jechuun akeekkachiisaniiru.
Qurxummiiwwan biqiltoota kana ni sooratu jedhamee yaadama, kunimmoo fayyaalessummaa Sirnakkoo eega jedhama.
Oomishni baala sammuu hadoochu rikardii haaraa irra gahe
'Gaaffiin dinagdeefi hojii-dhabuu maalirra jira?'
"Jiraachuu keenyaa tokkoon tokkoo biqiltuu dachee irra jiranii barbaachisoodha," jedhu Prof Lebbie, National Herbarium kan Sierra Leone keessa hojjetan.
"Yoo biqiltoota kana hin kunuunsinu ykn eegumsa hin taasifnuuf ta'ee akka isaan badan hayyamna ta'e, anaaf kun waanta guddaa addunyaan dhabdudha waan ta'eef amma irraa kaasee gatiin isaallee hangama akka ta'e hin beeknu."
Biqiltuu 'Bug-eater' odola fagootti argamtu irratti
Addunyaa kanarra gosti biqiltuu joogii bishaanii fakkaatan 150 caalan ni jiru. kan haarawaa argame kun ammoo Nepenthes biak, jedhama odola xiqqoo Biak jedhamtu qarqara kaaba Indoneeshiyaa New Guinea'tti argamurratti argame.
Madda suuraa, Martin Cheek, RBG Kew
Biqiltuu joogii bishaanii fakkaatan foon sooratan
Biqiltuun kun bakka buufta dooniitti waan argamaniif turistoota achitti baayyatanirraa kan ka'een sodaa baduutiif saaxilamoodha. "Biqiltuun kun barbaadamee qoforamuudhaan turistoota achirra darbanitti gurguramu ," jedhan botaanistiin Dr Martin Cheek. "Biqiltoota kana kunuunsuun baduurraa baraaruun yoo danda'ame malee akaakuun isaanii addunyaa irraa baduuf deemu."
Daraaraa gara fuula duraa qoricha kaanserii ta'uu danda'u
Biqiltuun haarawaa maqaan isaa Kindia gangan, jedhame akaakuu gosa bunaati. Saayintistoonni Kew yeroo hojiif dirreetti bobba'an biqiltuun kun lafa ashawaa magaalaa Kindia Guinea biyya Afriikaa Lixaatti argamtutti biqila.
Madda suuraa, Martin Cheek
Biqiltuu bunatti dhiyaatu
Akka keessaa cuunfaan Biological ta'e agarsiisutti biqiltuun kun faayidaawwan wallaansa fayyaa ni qaba, keessattuu mala farra kaanserii ni qaba.
Orchid kan jedhamu ammoo laga jiruu baafamee gurguramaa jira
Magaalaa guddoo Laos Vientiane jedhamu keessatti biqiltuun orchid jedhamu kun haalaan gurguramaa jira. Gosti orchid akka haphee qabu Paphiopedilum papilio-laoticus, jedhamu ammoo akka malee balaa baduudhaaf saaxilamee jira.
Madda suuraa, Adunyadethluangaphay
Biqiltuu orchid jedhamu amala haphee qabu Laos tti argamu
Biqiltuu Yam jedhamu akka haaraatti adda bahe
Akaakuun biqiltuun kun addunyaa bakka gara garaatti akka midhaan nyaataatti erga adda bahee booda bara 2002 gara Kew'tti qorannoodhaaf ergamee ture.
Biqiltuun Dioscorea hurteri, kan jedhamu yommuu ta'u Afriikaa Kibbaa KwaZulu-Natal keessatti argama. Biqiltuun kunis akaakuuwwan biqiltootaa warraa balaa addunyaa irraa baduudhaaf dhiyaataniitti ramadameera.
Madda suuraa, Gareth Chittendon
Biqiltuu abaaboo balaqqisaa qabu Vietnam keessatti argame
Biqiltuun adda ta'e kun ammoo, Oreocharis tribracteata, jedhama. Kaaba Vietnam keessa yeroo qorannoon taasifamaa ture kan bira ga'ame. Isaan booda biqiltuun kun UK keessattillee margeera.
Madda suuraa, Sadie Barber
Biqilaa bosana roobaa keessatti argame
Biqiltuun muka guddaa ta'e kun ammoo Lixa Afriikaa, bosona bokkaa Guinea keessatti argame. Dararaan biqilaa kanaa kan nama muruu yommuu ta'u maqaan isaa Talbotiella cheekii hanga bara 2015'tti saayintistoonni osoo hin beekiin turaniiru.
Biqilaa bosana bokkaa keessatti argame
Biqilaa miyeessaa laga keessaa
Madda suuraa, Thaisvasconscelos3
Biqilaa haarawaa akaakuu miyeessaatti ramadamu
Biqilaan kun maqaan isaa Pimenta berciliae, jedhama. Biqilaan kun miyeessaa kan nyaataafi miidhaginaaf gargaaran hunda of keessaa qaba.
Biqilaa daraaraa bosona duumessaa keessaa
Biqilaan bifa diimaddee qabu kun sulula Bolivia keessatti argame.
Madda suuraa, Mt Martinez
Biqilaa baduu danda'a jedhamee sodaatamu
Biqilaan biyya Kaameruunii argame jedhamu kun Vepris bali, jedhama. Kan marguu danda'us bosona Baddaa Bamenda keessatti. Sababii dhiibbaa manca'insa naannoo irra gahaa jiruunis ni bada jedhamee sodaatamaa jira.
Viidiyoo, Indiyaa: Dubartii qorichoota 500 biqiltootarraa hojjettu
19 Fuulbaana 2018
Lafti Kolombiyaa omisha Kookeeniin qabame dabalaa dhufeera
20 Fuulbaana 2018
Dhedheeroowwan Itoophiyaa lamaan, Nagawoo fi Yeneenesh, dhuguma waal kaadhimatanii?
Shamarree Tigraay uffannaa aadaa Oromoon dorgommii bareedinaa mo'atte
Yeroo dhuma kan haaromfame: 5 Sadaasa 2019